Wabiga Shabelle oo qarka u saaran inuu ku fataho xaafado ka mid ah magaalada Jowhar (Sawiro) – Xeernews24
Wabiga Shabelle oo qarka u saaran inuu ku fataho xaafado ka mid ah magaalada Jowhar (Sawiro)
23. September 2017 /in WARAR/NEWS /von admin
Wabiga Shabelle oo badhtamaha ka mara magaalada Jowhar ayaa qarka u saaran inuu ku fataho xaafado ka mid ah magaalada iyo weliba tuulooyinka ku yaal hareeraha wabiga, kadib markii heerka biyaha wabiga uu gaadhay meel aad u sareysa.
Xaafada kulmis oo ka mid ah afarta xaafadood ee magaalada Jowhar ayey ka jirtaa cabsida ugu badan waxaana dadka ku dhaqan xaafadaas ay sheegeen in cabsi xoog leh ay ka qabaan in uu wabiga ku soo fataho.
Sidoo kale xaafada Horseed ayaa xalay iyo caawa waxa ay ka jirtaa cabsi badan oo laga qabo inuu wabiga ku fataho balse dadaalo ay sameeyeen dadka ku nool xaafada iyo maamulka degmada Jowhar ayaa lagu guuleystey in la saaro jawaano ciid laga buuxiyay meelaha uu wabiga ka jilicsan yahay.
Wararka ayaa waxaa kale oo ay sheegayaan inay jirta cabsi laga qabo in wabiga uu ku fataho tuulooyinka ku yaal hareeraha wabiga waxana lagu guuleystey in la xidho buq ka baxday deegaanka Timire dhowaan balse illaa labaatan tuulo oo hareeraha wabiga Shabelle ayaa laga soo sheegayaa in wabiga uu korshubayo kadib markiiuu gaadhay heerkiisii ugu sareeyay.
Dadka ku nool gobolkan sh/dhexe ayaan sidii loo baahnaa uga faa’ideysan biyaha wabiga Shabeele mararka qaar waxaa dhacda iney timaado cabasho biyo la’aan, halka markalena cabasho ay ka timaado fataahaad uu sameeyo wabiga.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/09/IMG_0295.jpg 427 640 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2017-09-23 23:44:342017-09-23 23:45:43Wabiga Shabelle oo qarka u saaran inuu ku fataho xaafado ka mid ah magaalada Jowhar (Sawiro)
Xaflad aan Caadi ahayn oo ka dhacday magaalada Saylac iyo Dugsigii Sacaadiin... DAAWO: Diyaaraddii Ugu Horeysay Oo Caawa Ka Degtay Garoonka Muqdisho.